စက်တင်ဘာလ 2016 |3၏စာမျက်နှာ 78 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » စက်တင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 3)
ကင်မရာအော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်အယ်လ်ဘာနီ, ဒီနည်းကိုသောကွာနေ့9/ 30 လစာ $ 550 / 10 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 အပေါ် posted နယူးယော့ Duration: 09 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမဒီနည်းကိုများအတွက်အယ်လ်ဘာနီဒေသခံလေယာဉ်အမှုထမ်းလိုအပ် သောကွာနေ့9/ 30: * သင်လျှင်သင့်ထံမှငှားရမ်းဖွင့်လှစ် (C1 အပေါ်ရိုက်ကူး * ဒေသခံတစ်ဦး 2-300 + နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို * ကင်မရာကအေဲနျဂြီအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ...
1st လက်ထောက်ကင်မရာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကောလိပ်ဘူတာ, တက္ကဆပ် Duration:2ရက်, 10 /7လစာ $ 300.00 / 12 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 10 / 07 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့များမှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted စတင်သည် တက္ကဆက် A & M အတူ conjuncture အတွက်ကြွက်သားနို့များအတွက်ဘောလုံးအခြေတည်အပိုင်းအစရိုက်ကူး။ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး FS7, C300 သို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်ကင်မရာအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်။ ချုပ်ကိုင်ထား ...
10 / 11 လစာမှထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Fredericksburg, VA သို့ Duration: 10 / 13 ပေးမ 09 / 28 / 16 အပေါ် posted ယောဘကိုကျနော်တို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 10 / 11 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply မဟုတ်တဲ့ scripted တီဗီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ PA ဆိုပြီး။ လျှောက်ထားသူတစ်ဦးတရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ ယောဘသည်မောင်းနှင်မှု, တင် / ချဂီယာ, နေ့လည်စာကန့်သတ်ထားပါဝင်သည်ပေမယ့်မည်မဟုတ် ...
အသံရောနှောကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်အယ်လ်ဘာနီ, နယူးယော့ Duration: ဒီနည်းကိုသောကွာနေ့9/ 30 လစာ $ 400 / 10 ယောဘသည် 09 / 28 / 16 အပေါ် posted 09 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမဒီနည်းကိုများအတွက်အယ်လ်ဘာနီဒေသခံလေယာဉ်အမှုထမ်းလိုအပ် သောကွာနေ့9/ 30: * ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 သို့မဟုတ်2အသုံးပြု. ဒေသခံတစ်ဦး 788-664 + နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို * ENG အသံ Tech မှ * အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် - $ 400 / 10 ယခု Subscribe ...
တည်နေရာ Scout ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:2ရက်သတ္တပတ်, ASAP စတင်ဘို့ Scout မှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ့်တည်နေရာကင်းထောက်ရှာဖွေနေ 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် asap လစာထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမစတင်သည် နှစ်ပတ်။ Orange County တွင်နယူးယော့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဝါသနာယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? ကျေးဇူးပြု ...
ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်နယူးယောက်, ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ join ဖို့ပြောင်းလဲနေသောတစ်ဦးချင်းစီရှာဖွေနေအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ3/ 250 / 09 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်နယူးယော့ Duration: 28 လကတိကဝတ်လိုအပ်ပါသည်လစာ $ 16 / set နေ့ကယောဘကို တစ်ဦးမယ့်အင်္ဂါရပ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအစောပိုင်း 20th ရာစုအတွင်းအမေရိက၏အထင်ကရအမျိုးသမီးသတင်းစာဆရာတဦး Chronicles ။ ဒီလူ ...
တိုက်ရိုက်လွှင့်ဂရစ်ဖစ်အော်ပရေတာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်လိမ္မော်ရောင်,, CA Duration: အင်္ဂါနေ့အောက်တိုဘာလ 4, 2016 လစာ $ 450 / 12 နာရီယောဘသည် 09 / 28 / 16 အပေါ် posted 10 / 04 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ငါဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား တိုက်ရိုက်က်ဘ်ဆိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးလုပ်ကိုင်ရန်နိုင်သူအော်ပရေတာ။ ကျနော်တို့ဂရပ်ဖစ် AfterEffects အတွင်းမြှနှင့်အတူ cued လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ...
Model - မာယာ
Model - မာယာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: လစာ 09 / 28 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘအလုပ်ယောဘသည်ဖော်ပြချက်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားပေးမပေးမ: •3+ နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုတစ်မော်ဒယ်လင်း / texture အနုပညာရှင်အဖြစ်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု setting ကို။ •တင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်•နိုင်ခြင်း setting တစ်ခု post ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်မာယာ, Zbrush နှင့် Mari အဘိဓါန်၏အသိပညာ ...
3 ၏စာမျက်နှာ 78«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»